dimanche, 05 avril 2020 22:13
Toamasina: Sorona Masina Sampankazo nalefa mivantana tamin'ny haino aman-jery teto an-toerana
Nitondra am-bavaka tamin'ny alalana'ny lamesa notarihan'i Kardinaly sady Arsevekan'i Toamasina, Mgr Désiré Tsarahazana androany maraina, izay nalefa mivantana tamin'ny haino aman-jery teto an-toerana. Niaraka nitondra am-bavaka tamin'izany ny Minisitry ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsôsialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy, NAHARIMAMY Irmah Lucien, sy ny Governora Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 01 avril 2020 11:20
Pape Diouf: Lavon’ny coronavirus teo amin’ny faha-68 taonany
Olona fantatra loatra teo amin’ny sehatry ny baolina kitra i Pape Diouf. Filohan’ny klioba frantsay Olympique de Marseille izy teo anelanelan’ny taona 2005 sy 2009. Mpikarakara mpilalao kitra, ary efa mpanao gazety ara-panatanjahantena. Nindaosin’ny fahafatesana teo amin’ny faha-68 taonany, ny 31 marsa 2020 izy noho ny tsimokaretina coronavirus nahazo azy.
mardi, 31 mars 2020 12:44
Diosezin’i Rôma: Voan’ny coronavirus i Kardinaly De Donatis, Vikera jeneraly
Mitondra ny tsimokaretina coronavirus i Kardinaly De Donatis, Vikera jeneraly ao amin’ny Diosezin’i Rôma. Efa tsaboina izy amin’izao fotoana izao, tony ny fahasalamany. Natokam-ponenana avokoa ireo mpiara-miasa akaiky aminy. (Jereo Sary Tohiny)
Daniel Bevilacqua no tena anarany, Christophe no ahafantarana azy eo amin’ny sehatry ny hira. Hatramin’ny Malagasy isany mankafy ny sanganasany toy ny « Succès Fou », « Aline »… 74 taona izao i Christophe. Voan’ny tsimokaretina coronavirus ity, ary nampidirina hopitaly haingana androany ao Paris. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 28 mars 2020 17:01
Coronavirus: Nampiainga ny aingam-panahin’ny mpanakanto malagasy ny fihibohana an-trano
Maromaro ireo mpanakanto Malagasy nahavita namoron-kitra sahady mikasika ity valanaretina coronavirus, izay mahenika an’izao tontolo izao ity. Anisan’izany ry Mr Sayda, Mijah, Rheg, Shayron… Efa heno amin’ny onjampeo samihafa eto an-drenivohitra ny hiran’izy ireo, ny sasany efa mizara an’izany amin’ny Youtube ihany koa. Manao fanentanana ny tokony hitandremana noho ny mahazava-doza ity coronavirus ity ny ankamaroan’ireo hira mivoaka hatreto. (Jereo Sary Tohiny)
Fahafatesana voalohany tamin'ireo Eveka Katolika no nidona tamin'i Mgr. Angelo Moreschi, Arsevekan'i Gambella Ethiopie ny alarobia 25 marsa 2020, tao Brescia Lombardie, foiben'ity valanaretina coronavirus ity ao Italie. 67 taona Mgr. Angelo Moreschi, ary lehiben'ny Vikaria apostolika etiopianina ao Gambella, andrefan'i Ethiopie Salezianina Don Bosco i Moreschi nanomboka ny taona 1991, ary namasinina ho Eveka ny janoary 2010. Ny Sekretera jeneralin'ny Fiombonamben'ny Eveka tany Ethiopie no nanambara ny fahafatesany. Nalaza tamin'ny fikarakarana ny tanora sy ireo mahantra i Mgr. Angelo Moreschi, nahazo solon'anarana mihitsy hoe "Abba" na "Dada"
Ry Kristiana havana, Manoloana izao firongatry ny Coronavirus izao dia manan-kambara amintsika ny tenin'Andriamanitra: 1) Ny famindrampony: "Ny famindram-pon'i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany; lehibe ny fahamarinanao." (Fitom.3:22,23) 2) Ny fahatsarany: "Tsara Jehovah amin'izay manantena Azy, dia amin'ny olona izay mitady Azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana." (and. 25,26)
mardi, 24 mars 2020 11:47
Coronavirus: Nindaosin’ny fahafatesana i Manu Dibango, andrarezina amin’ny fitsofana saxophone
Nodimandry androany talata 24 marsa 2020 teo amin’ny faha-86 taonany i "Papy Groove" araka ny fanambarana nataon’ny fianakaviany. Nolazoin’ny aretina coronavirus i Manu Dibango. Tamin’ny 18 marsa 2020 no nilazany tao amin’ny pejiny facebook fa voan’ny Covid-19 ity. Mpihira sady mpamorona no mpitsoka saxophone kalaza izy. (Jereo Sary Tohiny)
Nihaona tamin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra androany sabotsy 21 marsa 2020, ireo filoham-piangonana ao amin’ny FFKM. Nisy fanambarana niarahana taorian’ny fihaonana. Nitondra teny ny Pastora Dr Rakotonirina David, filohan’ny FLM sady filoha amperinasa ny FFKM. Efa iaraha-mahalala fa tafiditra eto Madagasikara ny valanaretina coronavirus, hoy izy, ka « ny ezaka rehetra tsy maintsy atao izao, ifandrimbonan’ny olona tomponandraikitra rehetra na ara-panjakana na ara-piangonana na ny fiarahamonim-pirnena dia ny misoroka, tsy hahafahan’io valanaretina io mitombo eto amin’ny tanintsika. Tsy iadiankevitra intsony ny fisian’ny coronavirus eto fa ny atao dia ny hifehezana azy tanteraka mba tsy hitombo ».
samedi, 21 mars 2020 14:14
Fiangonana Loterana Malagasy: Hikatona daholo aloha ny Fiangonana, ary ajanona ireo Fivorian-drafitra mandra-pisian'ny fanapahan-kevitra vaovao
Nanao fanambarana ny Filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy, Pastora David Rakotonirina, sy ny Birao Foibe, androany, milaza fa « Manoloana ny valan'aretina izay misy eto amin'ny tany sy firenena. Ary koa ho fanarahana ny fepetra efa napetraky ny fanjakana Malagasy ny amin'ny famoriam-bahoaka. Dia mandray izany koa ny Fiangonana Loterana Malagasy. Ka ny Fiangonana rehetra dia akatona avokoa ny Rahampitso alahady faha III mialohan'ny Paska izao, sy ny fotoana rehetra anatanterahana fivoriana rehetra izany.